लथालिङ्ग रिलिज, कात्तिक १ मा ‘ऐश्वर्या’ आउने « Ramailo छ
लथालिङ्ग रिलिज, कात्तिक १ मा ‘ऐश्वर्या’ आउने
अभिनेता रमेश उप्रेतीले निर्माण तथा अभिनय गरेको फिल्म ऐश्वर्या कात्तिक १ मा रिलिज हुने घोषणा गरिएको छ । ऐश्वर्याको हाल सम्पादन कार्य भैरहेको छ । यस वर्षको तिहारमा तीन फिल्महरु प्रदर्शनमा आउने घोषणाले फिल्म नगरीमा चर्चा पाइरहेको छ ।
अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘कृ’ कात्तिक २ गते आउने भनी निर्माता भुवन केसीले बताएका छन् भने रेखा थापा र आर्यन सिग्देल स्टारर फिल्म लक्ष्मी पूजा कात्तिक २ गते आउने सुटिङ सुरु गरेका छन् । ‘ऐश्वर्या’, ‘रुद्रप्रिया’ र ‘कृ’ एकै मितिमा आउने घोषणाले तिहारको रिलिज तालिका लथालिङ हुने देखिएको छ । एकै मितिमा एक बाट दुई, दुई बाट तीन फिल्महरु प्रदर्शनमा आउने भएपछि अवस्था के होला ? दर्शकले कुन फिल्म छान्लान् ? यो निर्माता, वितरकले सोच्नु पर्ने हो । जुन सोचाईको अभाव उनीहरुमा देखिएको छ ।